Waxaan ka MacBook Pro Hard Drive soo kaban karto, Data?
Talaabooyinka inuu ka soo kabsado Xogta laga MacBook Pro Hard Drive
1 Waxaan soo kaban karto, Xogta laga MacBook Pro Hard Drive?
My MacBook Pro burburtay shalay. Hadda mar walba oo aan isku dayo inaan u reboot, waxaan ka helay shaashad cawlan. Waan ogahay waa jabtay. Laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan weli dib u soo ceshano karo xogta ka MacBook drive Pro adag, waayo, waan u files badan oo qiimo ku yaal. Waan ogahay hadii aan si xarun adeeg diray MBP ee dayactirka, dhammaan faylasha lagu gebi saari doonaa. Fadlan i tustaa jidkii ah inuu dib u helo xog aan. Mahad badan.
Halkan waa war wanaagsan, ilaa inta aad qaadan kartaa in aad MacBook drive Pro adag oo ku xirmaan ah computer cusub Mac, fursadda helitaanka dib faylasha waxay ku waa ku weyn yahay. Ka dhig wax akhriska hagahan oo aad yeelan doontaa in ay soo kabsadaan xogta ka MacBook drive Pro adag in hab fudud oo khatar la'aan.
First of dhan, waxaad u baahan tahay in la hubiyo in drive ay ku adag tahay in aad la burburiyo ama la jejebiyey Pro MacBook wali waa la xiran karaa Mac kale oo loo aqoonsan yahay ah drive dibadda adag. Markaas waxaad isku dayi kartaa adiga oo isticmaalaya barnaamijka la MacBook Pro adag xogta drive kabashada sida Wondershare Data Recovery for Mac inay sidaa sameeyaan. Utility waxa laga heli karaa u soo kabashada xogta ka wacan u shaqeyneysa MacBook Pro ama la jejebiyey MacBook Pro. Sidaa daraadeed, ayaad ugu soo kaban karto noocyo kala duwan oo xog ka MacBook drive Pro adag, sida sawiro, videos, files audio, document files, emails, iwm
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac ka hoos ku qoran, version maxkamad tani waxay suurtogal in aad baarista MacBook drive Pro adag intaadan gadan nooca buuxda u soo kabashada.
2 Talaabada inuu ka soo kabsado Xogta laga MacBook Pro Hard Drive
Haddaba ee ay bartaan sida inuu ka soo kabsado files ka drive adag ee ka jabay / burburiyo Pro MacBook. Haddii aad Pro MacBook si fiican u shaqaynayaan, waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay soo baxdo iyo rakibi utility ka saaran yahay ka dibna raac talaabooyinka si loo farsameeyo soo kabashada.
Tallaabada 1 Select Recovery Mode inay bilow MacBook Pro Hard Drive Recovery
Connect aad MacBook drive Pro adag la computer kale Mac iyo abuurtaan Wondershare Data Recovery for Mac ku yaal, waxaa lagu siin doonaa fursado kabashada qaar ka mid ah. Waxaad ka akhrisan kartaa tilmaamaha uu furmo suuqa barnaamijka si taxadar leh oo ay doortaan hab fiican oo aad u.
Halkan, aynu dooro "lumay Recovery File" mode si loo soo celiyo xogta ka MacBook drive Pro adag.
Tallaabada 2 Scan MacBook Pro Hard Drive u Khasaaray Files
Hadda utility lagu ogaan doonaa oo dhan muujiyaan drives on your adag Mac, oo ay ku jiraan aad MacBook drive Pro adag. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doorasho oo guji "Scan" si ay u bilaabaan iskaanka.
Tallaabada 3 Ladnaansho Xogta laga MacBook Pro Hard Drive Xulo
Ugu danbeyn, dhammaan faylasha recoverable la soo daabici doonaa suuqa kala dib markii iskaanka. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan, kuwaas oo faylasha aad doonaysid in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Mac.
Recovery Archive: Ladnaansho ZIP iyo rar Archive Files
Sidee inuu ka soo kabsado Registry hortagga Windows ka bilaabo
> Resource > Ladnaansho > Siduu u MacBook Pro Hard Drive Recovery